Madaxweynihii Gambia Yaxya Jammeh oo maanta si nabadgelyo ah uga baxay dalkiisa – Balcad.com Teyteyleey
Madaxweynihii Gambia Yaxya Jammeh oo maanta si nabadgelyo ah uga baxay dalkiisa
Madaxweynihii hore ee dalka Gambia Yaxya Jammeh oo dhawaan doorasho ka dhacday dalkasi looga adkaaday iyadoo Madaxweynaha cusub ee Gambiyana uu ku soo baxay Adama Barrow ayaa ogolaaday waan waan nabadeed oo aheyd inuu si nabadgelyo ah isaga baxo.
Madaxweyne Yaxya Jammeh ayaa waxa u dalka Gambia xukumayay muddo 22 Sano ah isagoo xukunka ku qabsaday Inqilaab mileteri ah, iyadoo dhanka kale Madaxweynaha cusub ee dalkaasina Adama Barrow uu sheegay inuu si deg deg ah u imaan doono dalkiisa Gambia, isla markaana uu fariisan doono Xarunta Madaxtooyada dalkaasi.
Wuxuuna isagoo la hadlayay Warbaahinta uu sheegay in marka u fariisto Qasriga Madaxtooyada Gambia uu si dhaqsi ah u magicaabi doono guddi baara arrimaha xuquul insaanka oo la xiriira xadgudbydii ka dhacay dalkaasi mudadii 22-ka sano aheyd ee Madaxweynihii hore Yaxya Jammeh uu xukunka dalkaasi hayay.
Mas’uuliyiin katirsan Ururka ECOWAS oo dhexdhexadin ka waday muranka u dhaxeeyay Madaxwynaha la doortay ee Gambiya iyo Madaxweynihii hore ee Doorashada madaxtinimada dalkaasi dhawaan looga adkaaday ayaa sheegay in Madaxweyne Yaxye Jammeh uu isaga baxay dalka Gambia isagoo ka talinayay mudo 22 sano ah , unna kicitimay dalka Equatorial Guinea.
Madaxweynihii Gambia Yaxya Jammeh ayaa noqonayaa Madaxweynihii If you want to get an affordable deal for your premarin, there’s a perfect chance for it! Buy it at our store now for only 9 USD! ugu horeeyay ee dalka Gambia oo si nabadgelyo ah xukunka u wareejiya tan iyo sanadkii 1965 oo ku begneyd markii Gambiya ay ka xuroowday Ingiriiska.
Madaxweyne Yaxya ayaa ka dhoofay Dalkiisa isagoo gacanta ku sita kitaabka QURAN KARIM-Ka , isagoo dhunkaday ka hor inta uusan gudaha u galin diyaaradii qaadi lahayd ,
Gudoomiye Ku xigeenka kowaad ee Aqalka Sare oo la Doortay
Saxaafadda Mareykanka oo si caro leh uga jawaabtay eeda Trump